Fifindràmonina · Septambra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Fifindràmonina · Septambra, 2007
Tantara mikasika ny Fifindràmonina tamin'ny Septambra, 2007
Tanora ary mamoy fo, vonona hiondrana
Afrika Mainty 20 Septambra 2007
Misy orinasa mpitady mpiasa ahiana ho sandoka nentina eo anatrehan'ny lalana any Madagasikara. Gateway Global Consultants, tarihin'izany Steve Turmel izany, milaza fa mpanolo saina maneran-tany, dia nahazo fandrarana hialana an'i Madagasikara , fa nampanantena Malagasy ana arivony asa any Bahamas ao amin'ny « West Palm Textiles and Garnments», raha mameno...
Mba misy zavatra tsara ve any AFrika?
Sodàna 17 Septambra 2007
Izany no fanontaniana miharo fandranitana voarain'i Kizzie, izay mpitoraka blaogy avy any Sudan vao tsy ela: We were in America and a famous Jewish-American human rights activist/writer/professor invited us for lunch. We talked and talked about the middle east/Islam/immigration/human rights issues and when my professor suggested they ask me something...
Jamaika: Fananjahana mivadika
Lahatsoratra Malaza 12 Septambra 2007
Mitoraka bilaogy momba ny antsoiny hoe “fananjahana mivadika” i Marlon James, ary koa momba ny antony noheveriny fa nilainy ny nandao an'i Jamaika: “I love my country but I’ve never missed it, perhaps because I have never forgotten the reasons I left.” “Tiako ny taniko fa tsy nalahelovako mihitsy, angamba...